05 April 13 - Twi Online
Friday Sermon: Building Mosques, Unity and Accord - 05th April 2013 - Ashanti Twi Online
ƐFIADA NYAMESƐM: Oforesuo Bosome da a ɛtͻ so 5, wͻ afe 2013
(Summary of Friday sermon – 5th April, 2013 – Ashanti Twi Translation)
ASƆREDAN SIE, NKABOM NE PƐREPƐREYƆ.
Hadhrat Khalifatul Masih kaa ne Nyamesɛm no wͻ “Baitur Rahman Asͻredan mu wͻ Valencia a ɛwͻ Spain. Ɔkanee saa Kuraan kyɛfa a ɛdi soͻ yi:
“Na monsͻ Allah ahoma no mu dendenden, mo nyinaa monka mmͻm, na mma mo mpaepae mo mu; na monkae Allah adom a Ɔde agu mo so berɛ a na moyɛ atamfo ma mo ho no, Ɔno na Ɔkaa mo akoma bͻͻ mu wͻ ͻdͻ mu, na N’adom nti mobɛyɛɛ sɛ anuanom; na na mo wͻ egya amena no kͻnkoro ano na Ɔno na Ɔtwitwa gyee mo firii ho. Saa kwan yi so no Allah kyerɛkyerɛ Ne mmransɛm mu kyerɛ mo, sɛdeɛ ɛbɛyͻ na moanya kwankyerɛ”.
“Na moma nnipa-kuo bi ntena mo mu a wͻn dwumadie ne sɛ wͻbɛfrɛ nnipa akͻ papa ho na wͻakyerɛkyerɛ yͻbea pa, na wͻabra bͻneyͻ. Na weinom saa na wͻbɛdi nkunim” (Surah Al-Imran, nyiyimu 104-105).
“Fa nyansa ne afotu pa frɛ nnipa kͻ w’Awurade kwan so, na fa kwan pa a ɛyɛ so ne wͻn nyͻ mpɛnsɛmpɛnsɛm mu. Ampa ara sɛ w’Awurade no nim nea wayera afiri Ne kwan so; na Ɔnim wͻn nso a wͻwͻ kwankyerɛ no mu (Surah Al-Nahl, nyiyimu 126).
Nyankopͻn adom afiada a ɛtwamu no, yɛdaa asͻredan a ɛtͻso mienu wͻ Spain no adi. Na Jama’at no ani agye yie fa saa dwumadie no ho na wͻn ani tͻ kͻso gye wͻn ho. Hadhrat Khalifatul Masih kaa Nyamesɛm a ɛtwa toͻ koraa wͻ Efiada a ɛtwam no fa asͻredan foforͻ no ho na ͻpɛ sɛ ͻtwe yɛn adwene si neɛma bi so.
Bͻhyɛ Messiah (ANN) no kaa sɛ: saa mmerɛ yi mu no yɛn Jama’at yi hia nsͻredan pii. Asͻredan yɛ Nyankopͻn fie. Ɛno nti na yɛn asi yɛn asͻredan wͻ kuro kɛseɛ anaa kuro ketewa mu no. Yɛbɛfa no sɛ, Jama’at no nkͻsoͻ fapem na yɛresie no. Sɛ kuro kɛseɛ anaa kuro ketewa bi wͻ hͻ na sɛ Muslimfoͻ kakrabi anaa ebi mpo nni hͻ koraa na sɛ Jama’at no mpuntuo hia wͻ hͻ a, ɛwͻ sɛ yɛsi asɛredan wͻ hͻ. Kwan biara so no, nhyehyɛeɛ ne sɛ, yɛsi asͻredan no wͻ nokorɛ die mu ne pɛpɛɛpɛyͻ ne nsusueɛ pa mu, ɛfiri sɛ Nyame nti na yɛresi asͻredan no. Ɛho mmoa nyɛ ade kɛseɛ biara anaa nipa baako adwuma anaa kwan bͻne so, Nyankopͻn No ankasa na Ɔbɛhyira so (Malfuzat, Vol 6 pg.119, 1984 Edition).
Yɛada saa nsɛmfua yi adi mpɛn pii na mmom ekuta nsɛm hia pii a ɛwͻ sɛ Ahmadiyyafoͻ twe wͻn adwene si so. Kyɛfa a ɛdi kan no ka sɛ “Asͻredan yɛ Nyame fie. Nyankopͻn adom, Ahmadiyyani biara gye Nyame di; ɛwͻ sɛ yɛtwe saa gyidie yi kͻ Nyankopͻn fie hͻ wͻ ahobraseɛ mu na yɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so atwe dͻm ahyɛ hͻ ma. Sɛ yɛtumi twe yɛn adwene gyina neɛma yi so a, ɛndeɛ na yɛ yɛ Nyankopͻn abͻdeɛ asɛdeɛ ama wͻn wͻ berɛ a ɛhia ma sɛ yɛtumi nya ͻdͻ ne tema soronko bi ma wͻn. Wͻ saa nsɛmpͻ yi so no, Bͻhyɛ Messiah (ANN) no aka nsɛm bi afa Asͻredan ho. Ɛwͻ sɛ nipa dͻm a wͻwͻ kuro no mu nyinaa ka wͻn ho bͻ mu na wͻyͻ asͻre wͻ saa asͻredan yi mu. Nhyira pii wͻ nipa dodoͻ anaa nkabͻm asͻreyͻ mu. Nkyekyɛmu de nyiyi mu ba wͻ berɛ a wei ne berɛ a ɛwͻ sɛ yɛhyia na yɛka yɛn ho bͻ mu. Nsɛm a ɛde mente mehoase bɛba biara no, ɛwͻ sɛ yɛbͻgu na yɛtwe yɛn ho firi ho. Enti wei yɛ Nyankopͻn fie na ɛwͻ sɛ Ahmadiyyafoͻ a wͻwͻ tena berɛ yi (Valencia) no hyɛ nkabͻm asͻreyͻ yi ma wͻ berɛ a wͻn bɛka wͻn ho abͻm wͻ ͻdͻ ne tema kwan so. Bͻhyɛ Messiah (ANN) no kaa saa nsɛm yi mfie (108) a atwam no. Ɛwͻ mu sɛ ͻno ankasa na ͻtetee n’akyidifoͻ no wͻ sunsum ne Nyame suro kwan so. Na wͻn Nyame suro ne wͻn ahoteeɛ ne kronkron bea no wͻ soro sen nnɛ yi.
Na wͻsuro Nyame yie na wͻsan yͻ wͻn asͻre yie wͻ Nyamesuro kwan so. Mmom, wͻn a wͻ gyee Bͻhyɛ Messiah (ANN) no diieɛ no yɛ wͻn a na wͻne Nyame wͻ nkitahodie soronko. Ne nyanaa akyi no, ɛyɛ Nyankopͻn kͻmhyɛni adwuma sɛ ͻbɛkyerɛkyerɛ Nyamesuro mu (Taqwa) na ͻde nipa akͻ kwan tenee so. Wei nti na ͻtwee yɛn adwene de sii n’akyidifoͻ no nsɛm so no. Na ɛhia no sɛ, sɛ yɛanda no adi anaa yɛankyerɛkyerɛ Nyamesuro (Taqwa) wͻ saa berɛ yi mu anaa mfitiaseɛ yi a, yɛrenya nhwɛsoͻ biara a yɛn asefoͻ no bɛdi akyire.
Hadhrat Khalifatul Masih aka sɛ, Bͻhyɛ Messiah (ANN) no akyidifoͻ no ho nsɛm nnidisoͻ a ͻhyɛɛ aseɛ Efiada pii a etwa mu no, ɛho san hia. Yɛanka akyidini biara ho asɛm na wͻn a yɛkaa wͻn ho asɛm no; na ɛyɛ nsɛmfua kakra bi. Ne nyinaa akyi no, wͻwͻ gyinabrɛ kɛseɛ a ɛma yɛn nhywɛsoͻ ma yɛbͻ mpaeɛ ma wͻn.Valencia ha no, sɛ Bͻhyɛ Messiah (ANN) akyidifoͻ no abusuafoͻ wͻ ha a, wͻn mbͻ mpaeɛ ma wͻn mpaninfoͻ no. Mmom, nwuma pii wͻ hͻ a ɛwͻ sɛ yɛyͻ no wͻ kuro yi mu. Ɛwͻ sɛ yɛde anidasoͻ a ayera wͻ mfie pii a abɛsen kͻ no san ba bio, na nnipa san so ka wͻn ho bͻmu adi Ɔkͻmhyɛni Kronkron Muhammad (NNN) no akyi. Ansa na yɛbɛyͻ wei no, nea adi kan yɛ Nyamesom ansa na Nyamesɛmka (Tabligh) wͻ nkabom kuo baako mu.
Yɛka nsɛm pii wͻ saa kuro yi mu, enti deɛ edi kan no ɛwͻ sɛ yɛda suban pa adi. Sɛ wͻn a wͻdi Jama’at no anim no anka ambͻmu a, ndeɛ wͻn anyɛ Nyankopͻn fie asɛdeɛ. Huzoor aka sɛ, wͻaka no da sɛ, yɛbɛda asͻredan fɛ no adi no, ɛne sɛ yɛbɛnya gyidie a yɛde bɛba asͻredan no mu abɛyͻ asͻre ama no ayɛ fɛ, sɛ wͻn sͻ ne tema nso da adi a. kyɛfa a adi kan a Huzoor kenkan no nɛ yi kyerɛ ͻdͻ soronko san ma yɛhunu sɛ ɛyɛ Nyame adom nti na yɛn ayɛ baako. Ɔgyidini papa biara ndi mmra biara so, Nyankopͻn nkyerɛkyerɛ nyinaa.
Huzoor aka sɛ, obiara nyi mfiri Nyankopͻn mmra ase. Nyɛ ͻno anaa obiara, sɛ ͻyɛ obi a ͻwͻ dibrɛ wͻ Jama’at no mu, Jama’at no asͻfoͻ, Ahmadiyyafoͻ mmaa ne marima. Mmera tenten a yɛbɛsͻ Nyankopͻn ahoma no mu, na yɛdi Kuraan Kronkron no mmra ne ne nhyehyeɛ so na yɛakae N’adom a W’ama yɛn Ahmadiyyafoͻ, yɛbɛn Ɔno ne Ne som baeɛ asɛdeɛ ama no. Afei nso yɛbɛsͻ Ɔkͻmhyɛni (NNN) ne ne deɛ ͻbrɛɛ ne ho ase maa no nkyerɛkyerɛ pa no mu a ɛyɛ Bͻhyɛ Messiah (ANN) no. Yɛbɛhyɛ Nyankopͻn adom a Ɔde ama yɛn no ma. Asuaeɛ a yɛn ne Khalifa a ͻwͻ nɛ mmerɛ yi mu asuaeɛ no (Bai’at), kwan biara so no yɛre ntie n’asɛm nkoa na yɛbɛsan adi n’asɛm no so. N’ani bɛgye Nyankopͻn nhyira no ho. Ɛwͻ sɛ yɛkae sɛ, Kuraan Kronkron no, Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) no, Bͻhyɛ Messiah (ANN) no, nansiananmu (Khalafate) a ɛwͻ Ahmadiyya som no mu nhyehyeɛ wei anitia biara no rebɛn ogya amena no ho. Yɛresͻ Nyankopͻn ahoma no mu den na yɛrekaekae Nyankopͻn adom bɛma yɛn adi nhyehyeɛ no so. Ɔdͻ kan, tema ne onua dͻ bɛtena Ahmadiyyafoͻ na atwe wͻn afiri ogya no ho. Ahmadiyyafoͻ kan no twe wͻn ho firi wͻn a wͻkra wͻn nsɛm na wͻn neyͻeɛ wͻ saa ͻkwan yi soͻ no tiri ayɛ yie. Gyesɛ obi aduru saa gyinabrɛ yi ansa na wͻatumi asaman afoforͻ ama Onyankopͻn.
Nnɛ yi, nipa dodoͻ noara nnye nni sɛ Nyame te ase. Nso, Spainfoͻ atwe wͻn ho abɛn Nyamesom. Nna mienu ni, wͻyͻͻ akwaaba nhyiamu bi maa Spainfoͻ wͻ Valencia man mu. Valencia Manpanin baa saa nhyiamu yi ase bi na nkasaeɛ mu no ͻkaa sɛ, nkurͻfoͻ repo Nyamesom na ehia sɛ yɛtwe wͻn bɛn Nyamesom. Hadhrat Khalifatul Masih kaa sɛ, ne tipɛnsofoͻ a wͻahyia wͻn wͻ apueɛ afa nyinaa mu no, wei ne nipa a wͻatumi anya dadwene ama Nyamesom.
Nyankopͻn akyerɛ no pefee sɛ Islam ne nokwasom no. Nti ɛsom biara ni hͻ a ɛbɛtumi atwe nipa abɛn Onyankopͻn; ɛsom biara nni ho tumi. Na wͻn a ɛyɛ wͻn asodie sɛ wͻbɛhyeta Islam ne wͻn a wͻde ‘Onyankopͻn-Ahoma’ no ayɛ wͻn adom ne Ahmadiyyafoͻ. Sɛ yɛanyͻ koroyɛ na yɛyɛ mpaepaemu a, yɛbɛkͻ akͻ yi y’ano wͻ Onyame anim. Mekaa wͻ Efiada a atwam no sɛ, Spainfoͻ a na wͻn nananom yɛ Muslimfoͻ no mu mpempem reba Islam mu bio. Nanso wͻnhunuu Islam papa no. Ɛwͻ sɛ yɛma wͻhunu. Ahmadiyyafoͻ dodoͻ noara a wͻwͻ “Europe” no gyee Islam diieɛ wͻ wͻn honhom pa mu nanso Ulemafoͻ (ɛsom mu mpaninfoͻ) ankyerɛ wͻn honhom mu mpuntuo no a wͻrehwehwɛ no. Saa nkurͻfoͻ yi kͻͻso ara hwehwɛɛ mu na wͻbɛgyee Ahmadiyya diieɛ. Ahmdiyyani biara nkae sɛ, obiara a ͻgye ɛsom yi di na ͻbɛyͻ ɛsom yi foforͻ biara nya honhom mu asomdwoeɛ nti wͻn a wͻayɛ Ahmadiyya som akyɛre no nyinaa nsese wͻn ankasa ho. Sɛ wͻn a wͻayͻ ɛsom yi akyɛre no titiriw wͻn a wͻfirii Pakistan no, anyɛ wͻasɛdeɛ a, wͻbɛpamo nkurͻfoͻ a wͻrehwehwɛ nokorɛ no.
Wͻ saa Valencia nhyiamu yi mu no, Huzoor kasaa kakra faa Islam nkyerɛkyerɛ ho. Ɔbaa bi a wͻabͻ duku bɛhunu no akyire. Na ͻsɛ Spain ni, na ͻkyerɛɛ sɛ ͻyɛ Muslimni. Ɔkaa sɛ, wͻakyerɛ Islam nkyerɛkyerɛ pa no mu yie. Berɛ a Huzoor kaa sɛ ͻbaa no sɛ Spain ni no, Maulwi Karam Illah ba a na ͻwͻ hͻ no kyerɛɛ mu sɛ ampa, na ͻyɛ Spain ni na ͻbɛyͻͻ Islam. Ɔbaa no buaa sɛ; nyɛ sɛ wͻasakra kɛkɛ na emom ne nananom som na wͻasͻ mu. Spainfoͻ dodoͻ no ara wͻ hͻ a wͻrehwehwɛ wͻn nananom som pa no. Ɛwͻ sɛ yɛyͻ adwumaden wͻ saa mmea yi ne saa nkurͻfoͻ yi mu. Huzoor kaa sɛ, ͻbɛkͻso asiso dua sɛ, sɛ yɛpɛ sɛ saa adwuma yi yɛ nhyira a, ɛsɛ sɛ yɛfa Onyankopͻn nkyerɛkyerɛ no so yɛ nwuma.
Bͻhyɛ Messiah (ANN) kaa sɛ, Asͻredan yɛ nkͻsoͻ ne mpuntuo fapem nanso ͻkaee yɛn sɛ, ɛsɛ sɛ adwen a ɛtaa akyire no yɛ adwen pa anaa akoma pa mu. Ɛwͻ mu sɛ aniteɛ ne nimdeɛ kͻ bͻ mu deɛ nanso akoma pa ne titiriw. Sɛ akɛsesɛm firi y’adwendwene mu a, Basharat Asͻredan (Pedro Abad) ne saa Asͻredan yi de mfaso pa bɛba.
Saa nhyiamu a wͻyͻ maa asͻredan no wͻ Valencia no yɛ nhyiamu kɛseɛ a edi kan a Spainish Jama’at no ayͻ. Adͻfoͻ, animdifoͻ, Aban mpaninfoͻ ne Amanyͻfoͻ na wͻkͻͻeɛ. Wͻn nyinaa ani gye nhyiamu yi ho na dodoͻ noara kaa sɛ, wei ne mmerɛ a edi kan a wͻate Islam nkyerɛkyerɛ pa no. Dodoͻ noara kaa sɛ, wͻn ho dwirii wͻn. Ampa ara sɛ, hͻhoͻ bi a na ͻnnye Onyankopͻn nni nyaa adesua wͻ Nyamesom ho. Nnɛ yi Bͻhyɛ Messiah (ANN) no akyidifoͻ no nkoara na wͻbɛtumi ada Nyankopͻn teaseyͻ mu gyidie ne Nyamesom fɛ a ɛyͻ adi; wͻne nkurͻfoͻ a Onyankopͻn ama N’ahoma no nya ayɛ merɛ ama wͻn. Wͻde nhyiamu yi mu nkyerɛkyerɛ no bɛkͻ koowaa nkraataa mu na MTA kasafunini no nso a ɛkorakoraa saa nkyerɛkyerɛ no nso ada no adi. Nhyiamu da no mu no, Valencia mmrahyɛbɛdwamu kasamafoͻ (Speaker of parliament) no kͻͻ Madrid man mu. Madrid yɛ dͻnhwere mienu ketekye akwantuo. Na ͻnim sɛ ɛntumi mma saa nhyiamu yi bi esiansɛ ͻkyɛreeɛ. Nanso, saa ͻkasamafoͻ yi tumi baaeɛ. Ɔka kyerɛɛ ne hyɛnkafoͻ no sɛ ͻnfa no nkͻ nhyiamu no ase prɛko ne ntɛm ara so.n’ani gyee nkyerɛkyerɛ no ho yie. Na ͻnim sɛ ͻbɛto bɛyɛ dͻnhwere-fa pɛ nanso ͻkyɛreeɛ. Ɔkaa sɛ, Huzoor ada Islam nkyerɛkyerɛ pa no adi. Saa nso ara na na ahͻhoͻ afoforͻ nso tesɛ amanyͻfoͻ, alͻyafoͻ, adͻkotafoͻ ne mmrahyɛ-bɛdwafoͻ nso wͻ hͻ. Na ahͻhoͻ no dodoͻ yɛ ͻha ne nwͻtwe (108), ɛfa adͻfoͻ a mmerɛ bi akyi na wͻtia yɛn nyinaa. Wͻtiee saa nkyerɛkyerɛ yi no, wͻn adwene mu daa hͻ. Wiase rehwɛ na ɛwͻ sɛ yɛyͻ y’asɛdeɛ. Saa asodie yi hia ma nteaseɛ.
Kyɛfa a ɛtͻso mienu a wͻkenkanee ahyɛaseɛ no kyerɛ sɛ; “moma nipa kuo bi nfiri mo mu a wͻbɛkyerɛ papa….. na wͻabra bͻne”. Wei titiriw gyina hͻ ma Jama’at asͻfoͻ no esiansɛ Khalifa no ayɛ wͻn n’anan mu-sifoͻ wͻ nkyerɛkyerɛ anaa Anyamesɛmka mu. Wͻyɛ nsɛmkafoͻ anaa akyerɛkyerɛfoͻ ma nkurͻfoͻ. Sɛ asͻfoͻ no antumi ankyerɛ suban papa a, wͻbɛyɛ dɛn na wͻatu afoforͻ fo? Jama’at yi mu Nyamesɛka ne afutuo yɛ wͻadwuma na ehia ma pisie. Ɛsan nso hia ma aboterɛ, sotie yͻ ne obuo, na afei yɛni deɛ yɛka so. Wͻyɛ Khalifa no ananmusifoͻ ma Jama’at yi honhom mu mpuntuo nti ɛsɛ sɛ wͻbu saa asodie yi. Wͻn adwuma yͻ mu no, wͻtumi hyia ͻhaw, nnipa afa nso, wͻtumi sͻ wͻn aboterɛ hwɛ wͻ mpɛnpɛnsoͻ bi nanso ntɛm ara wͻmͻ mpaeɛ wͻ saa merɛ no mu na wͻnkae sɛ wͻatu wͻn ho ama Otumfoͻ Onyankopͻn na ɛsɛ sɛ wͻtwe wiase ba Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) no frankaa no ase. Nti eni kwan sɛ deɛ obi bɛka biara bɛyɛ akwansideɛ ama wͻn botaeɛ. Wͻn bͻhyɛ no da wͻn ne Onyame Kɛseɛ anim, na nna wͻanim. Sɛ wͻyɛ koom ma suban bͻne a mpaninfoͻ no bi rebu no a wͻbɛnya Onyankopͻn nkyɛn anigyeɛ, esan sɛ ‘wͻrekyerɛ papa’ wͻ akwan nyinara mu. Nyɛ sɛ wͻretwe wͻho afiri kama-menka nkoara ho na emom wͻntwe wiase nyinara nfiri ho. Nipa kuo a wͻtͻso mienu a wͻakyerɛ wͻ saa kyɛfa yi mu yɛ Jama’at yi mu mpaninfoͻ. Wͻama wͻn asodie bi a wͻbɛbu ho nkonta. Nesaa nti, ɛsɛ sɛ wͻda suban pa adi na wͻdi nokorɛ na wͻma afoforͻ nso di akyire.
Sɛ wͻankyerɛ suban pa, wͻkasa wͻ aberɛ a wͻni so a, afoforͻ bɛka wͻ wͻn anim sɛ wͻnhwɛ wͻn suban yie, wͻnhwɛ wͻn honhom mu mpuntuo, wͻnkyerɛ abodwoͻ na wͻatumi ahyeta Jama’at no. Annyɛ saa a wͻn de nkyekyɛmu ereba. Ɛwͻ sɛ Sadr Jama’at ne Ameer Jama’at na edi nkan ebu asͻfoͻ no. Nanso nni kwan sɛ asͻfoͻ no ɛfa no sɛ ɛyɛ wͻn asɛdeɛ sɛ wͻbu wͻn, ampaara sɛ, ɛwͻ sɛ wei ɛma wͻnom yɛ ahobraseɛ na ͻtwe wͻn kͻ nsesaeɛ mu wͻ wͻnom ankasa mu. Sɛ yɛtumi duru saa gyinabrɛ wei wͻ kwan biara so a yɛn Taribiyyat ho nsɛm so bɛsiesie. Ɛyɛ Nyame pɛ a (Insha Allah) yɛn dawubͻ nkyerɛkyerɛ (Tabligh) no bɛboa ano anya anwanwasoͻ nkunimdie. Nkabom, obuo ne asomdwie no bɛma adeɛ a yɛbɛyɛ no ayɛ nhyira.
Hadhrat Khalifatul Masih kyerɛkyerɛ emu sɛ, ɛwͻ sɛ obuo ne nteaseɛ a ɛwͻ wͻn a wͻwͻ dibrɛ wͻ Jama’at no kͻ soro, wei sei ho hia sɛdeɛ bɛyɛ na yɛbɛnya nhyira wͻ yɛn nyuma nyinaa mu. Nkyekyɛ mu, pɛsɛmenkomenya ne abufuo de nsunswanso bͻne ba. Hadhrat Khalifatul Masih a ͻdii nkan ɛkaa asɛm bi a ɛkyerɛ saa kyɛfa yi mu. Obi kͻka kyerɛ papa bi a ͻdi mu sɛ n’adamfo ͻsikani bi adidi no atɛm. Papa no nso frɛɛ saa nipa no na ͻhyɛɛ aseɛ didii no atɛm. Ɔbusaa papa no sɛ adɛnti na w’adidi no atɛm a ɛnte saa. Ɔyii n’ano sɛ ɛfiri sɛ papa baako no aka asɛm a ɛnnyɛ akyerɛ n oa ͻnntumi mmfa. Papa no a ͻdi mu no kaa sɛ, m’adidi wo atɛm na w’atie no din na w’ankasa ɛfiri sɛ wo wͻ aboterɛ a yɛdetie asɛm din. Nanso aberɛ a papa baako no yɛɛ adeɛ a wommpɛ no, wo didii no atɛm ɛfiri sɛ wo buu no sɛ wodi mu kyɛn no. Anka ɛwͻ sɛ wonya aboterɛ tesɛ deɛ wonyaa no wͻ m’anim no. Me sͻͻ w’aboterɛ na hwɛɛeɛ. Mpɛnpɛnsoͻ a wowͻ aboterɛ kͻsi. Tesɛ deɛ yɛnya aboterɛ ma wͻn a wͻwͻ dibrɛ kyɛn yɛn no saa ara na ɛwͻ sɛ yɛnya ma wͻn a wͻhyɛ yɛn ase ne wͻn a yɛne wͻn wͻ mpɛnpɛnsoͻ nso na wei nkoara na ɛbɛma abufuo ne ntͻkwa so atwa. Yɛtu ewiase fo nanso sɛ aberɛ no duru hͻ a na yagyae y,aboterɛ ama no kͻ.
Wͻnom a wͻwͻ Jama’at no mu no nnwene mmfiri wei mu sɛ wei no yɛ asɛdeɛ ma wͻn a w’atu wͻnho ama ne wͻn a wͻwͻ dibrɛ no nkoara. Nteaseɛ ne asomdwie na yɛde deɛ Onyankopͻn ne Ne Kͻmhyɛni (NNN) aka no bɛyɛ adwuma sɛ yɛbɛma yɛn Nyamesuro atu mpon. Ɛfas Bͻhyɛ Messiah (ANN) no nkyerɛkyerɛ ho no na yɛbɛyɛ ahobraseɛ ama deɛ Khalifa a ͻwͻ hͻ saa berɛ no aka no yɛ obiara asɛdeɛ. Ɛyɛ nhyɛ ma obiara sɛ ͻbɛbu wͻn a wͻwͻ dibrɛ no. Ɛyɛ Ahmadiyyani biara a sɛdeɛ sɛ ͻbɛda suban pa adi wͻ aberɛ a ͻwͻ fie anaasɛ ͻwͻ abͻnten. Sɛ Ahmadiyyani biara yɛ n’asɛdeɛ yie a ɛno nkoara na ɛbɛbͻ yɛn ho ban afiri egya no ano. Onyankopͻn annka sɛ nkyerɛkyerɛ yɛ asͻfoͻ ne wͻn a wͻwͻ dibrɛ no nkoara adwuma. Wͻfrɛ afoforͻ ama Onyankopͻn no yɛ obiara adwuma. Kyɛfa a ɛtͻ so miɛnsa a me kenkan wͻ ahyaseɛ no, Onyankopͻn ka sɛ, ɛyɛ obiara asɛdeɛ ne ɛkwan no nso W’akyerɛmu. W’atwerɛ sɛ, yɛmfrɛ afoforͻ ma Nyame wͻ nyansa mu.
Seisei saa asɛm yi a y’aka no wͻ asͻredan foforͻ wͻ Valencia no ɛreterɛ, Tabligh akwan foforͻ ebiebie. Koowa nkrataa noahyɛ aseɛ ɛretwa, seisei ɛyɛ Tabligh ɛmmerɛ. Asɛmfua “Hikmah” anaasɛ Nyansa a wͻde ayɛ adwuma wͻ Tabligh mu (16:126) wͻ nkyerɛaseɛ bebiree. Deɛ adi kan, ɛwͻ sɛ wͻnya ɛsom ho nimdie a yɛbɛtumi anya afiri Kuraan Kronkron no mu ɛne ne nkyerɛmu no mu. Ɛwͻ sɛ yɛn ngyinasoͻ ne adwene mu pͻ no mu yɛ dena a ɛnam wei so. Ne ahdith, ɛwͻ sɛ nyinasoͻ no mu yɛ den nam wei so. Nyinasoͻ a emu yɛ den a yɛbɛtumi de ayiyi adwene mu naa nyinaa ɛfiri hͻ a ɛfa Kͻmhyɛni Kronkron (NNN) no ho no wͻ sɛ yɛyɛ ho nhwehwɛ mu. Hikmah nso kyerɛ pɛpɛɛpɛyͻ. Ɛnni kwan sɛ yɛn nteaseɛ gyina adeɛ a ɛnni mu so, ɛne sɛ ɛnni kwan sɛ yɛn nyinasoͻ yɛ adeɛ a ɛnnyɛ. Aberɛ a wͻn a wͻnnyɛ Ahmadiyyafoͻ ɛhwere wͻn nyinasoͻ no na wͻn ahyɛ aseɛ ɛredidi atɛm.
Bͻhyɛ Messiah (ANN) no ahyɛ yɛn wͻ nimdie mu sɛ asɛm biara nni hͻ a ɛbɛma yɛn ayɛ adeɛ a ɛnnyɛ anaasɛ basabasayɛ. Wei sei nti na ɛho hia sɛ yɛbɛkenkan Bͻhyɛ Messiah (ANN) no atwerɛsɛm no. Na ɛmmoa yɛn wͻ Tabligh mu nkoara na mmom ɛbɛboa yɛn wͻ Taribiyyat mu ɛnso. Yɛde Hikmah nso gyina hͻ ma suban pa ne akoma pa. Ahmadiyyafoͻ afoforͻ busa no ͻyaw mu sɛ ɛkwan bɛn na wͻnom bɛfa so ayɛ Tabligh akyerɛ wͻn a wͻbɛn wͻn ne wͻnom a wͻdͻ wͻn no, sɛ wͻn a wͻdͻ wͻn no kyerɛ abufuo a, wͻn nyɛ dinn na wͻnya aboterɛ. Wͻdi nipa bebiree so nkunim wͻ aboterɛmu. Ebinom twerɛ brɛ me sɛ wͻn aboterɛ ho aba mfasoͻ ama me busuani wei ne wei de nsa ahyɛ Bai’at ase.
Hikmah, asɛmfua a Kuraan Kronkron no de yͻͻ adwuma no w’akyerɛ mu wͻ “Dictionary” mu sɛ ɛtwe obi firi gyinabrɛ a ͻnnim ho hwee mu. Wͻn a wͻyͻ Tabligh no ɛmfa saa kwan wei so na wͻn hunu sɛ adeɛ biara a wͻbɛka no ɛmmfa afoforͻ nnkͻ tebea a ɛnnyɛ mu. Ɛwͻ mu sɛ, nkurͻfo bi wͻ hͻ a, Maulwifoͻ bi a wͻnakoma yɛ den na w’ahyehyɛ ato hͻ sɛ, wͻnom bɛwu wͻ wͻn tebea no mu, nanso sɛ yɛde nyansa yɛ adwuma wͻ aberɛ a yɛreyɛ Tabligh na sɛ nkurͻfoͻ ba ɛnam wͻnom nyansa ne wͻ abrabͻ mu a, wͻn akoma bɛtumi abɛyɛ merɛ. Deɛ atwa toͻ, sɛ nkurͻfoͻ angye antomu a wͻnom gyae deɛ ɛnnyɛ, wͻnom a wͻnni ɛsom no akoma bɛyɛ merɛ, na wͻn a wͻnnim hwee no twe wͻn ho firi deɛ ɛnnyɛ ho. Na wͻnngye Nyame nni no bebiree gyina Valencia asͻredan no animu hͻ. baako tie ɛnoͻma a Huzoor kyerɛɛ mu no ɛfiri Kuraan Kronkron mu no ͻkaa sɛ, mɛnya a anka mɛkͻ so atie no aberɛ biara. Akyire no wͻnom hyiaa Huzoor. Islam nkyerɛkyerɛno nyansa ahyɛ no ma a sɛ wo kyerɛ mu wͻ tebea a ɛwͻ hͻ no mu a, ɛyɛ adwuma paa. Hadhrat Khalifatul Masih san siiso sɛ, seisei a Jama’at no aba Valencia ha no, ɛwͻ sɛ yɛtͻ kͻ so yɛ ɛhoo adwuma.
Hikmah nso hwehwɛ sɛ yɛbɛ ka nokorɛ. Islam yɛ nokware som na ɛmma adeɛ a ɛnnyɛ biara ho kwan. Yɛnka Ulemafoͻ no a wͻka sɛ momfa nkontompo nyɛ Hikmah. Ampaara sɛ, baabi a nkontompo wͻ no, pɛpɛɛpɛyɛ ne teneneeyɛ nni hͻ na wei de bͻne ne basabasayͻ ban a wei nnyɛ Islam. Asodie kɛseɛ paa da Ahmadiyyafoͻ so wͻ aberɛ a Onyankopͻn ka sɛ yɛn hyɛ Hikmah mu ma yere wo nimdeɛ mu wͻ kwan biara so ne wo mpɛnpɛnsoͻ wͻ pɛpɛɛpɛyͻ mu na yɛn hunu nipa su. Ɛyɛ adeɛ a ɛho hia sɛ yɛbɛhunu nipa sun a yɛntumi nnyɛ Tabligh wͻ aberɛ a ɛnnka hoo. Wei no mo nyinaa bɛma wo akͻ papa tebea a ɛwͻ soro mu. Wei sei kyerɛ adeɛ a ɛbɛma w’akoma ayɛ merɛ. Ɛne sɛ adeɛ a ɛhyɛ Hikmah mu na ɛte ha na ɛkwan ahodoͻ anaasɛ ɛkwan soronko so na yɛfa so yɛ Tabligh ɛkyerɛ wͻn no, ɛwͻ sɛ yɛsua na yɛfa so. Na ɛbͻ yɛn ho ban ɛfa saa wei ɛnso ɛso “na fa kwan pa a ɛyɛ so ne wͻn nyͻ mpɛnsɛmpɛnsɛm mu” yɛn adwuma ne sɛ yɛbɛyͻ Tabligh na ɛyɛ Onyankopͻn na ɛde nsunswansoͻ no bɛba. Wei sei nti na ɛho hia sɛ yɛbɛ sesa yɛn su.
Bͻhyɛ Messiah (ANN) no kaa sɛ, adekorͻ no ara na sɛ woka no wͻ baabi a obi bɛyɛ wo yͻnko na asɛm korͻ noara woka no wͻ baabi a obi bɛyɛ wo tamfo. Ɔkaa sɛ, aberɛ biara ɛwͻ sɛ yɛde “na fa kwan pa a ɛyɛ so ne wͻn nyͻ mpɛnsɛmpɛnsɛm mu” no yɛ adwuma na ͻkaa sɛ ampaara sɛ wei na Onyankopͻn frɛ no Hikmah no. Ɛwͻ sɛ yɛhwɛ Hikmah so yie ɛfiri sɛ nkabom yɛ ma Tabligh. Onyankopͻn adom nti W’abue Tabligh akwan, seisei ɛgyina nipa no so sɛ ͻbɛnya mfasoͻ afiri so. Koowa nkrataa atwa nsɛm a Huzoor kaaeɛ no sɛ wͻpam Muslimfoͻ wͻmfia ahensoo (700) na seisei yɛbɛsan aba yɛn akyi. Yɛn annisode hunu ɛmmaa mu wͻ nsɛm a w’atwa no ɛnkoara so. Saa ara na wͻkaa no dawubͻ mu wͻ Hadhrat Khalifatul Masih a ͻtͻͻ so ɛnan no aberɛ so wͻ berɛ a ͻredaa Basharat Asͻredan no adi wͻ Pedro Abad. Nanso ɛdeɛ bɛn na yɛanya wͻ mfie aduasa a atwa mu no? Nkurͻfoͻ a wͻn anisoadehunu ɛbamu no, ɛmma mu wͻ twa a wͻtwa ba dawubͻ no mu ɛnkoara. Ɛwͻ sɛ yɛkͻ so hunu no wͻ yɛn mu na yɛhyehyɛ ɛnoͻma na afei yɛdeyɛ adwuma wͻ nkabͻmu na yɛn home kͻsi sɛ yɛbɛnya deɛ yɛrehwehwɛ no.
Adeɛ a ɛho ɛnnhia nni kwan sɛ Ahmadiyyani ɛdi akyire. Ɛnni kwan sɛ ͻhwɛ adeɛ a Ameer anaasɛ Sadr ka fa wͻn ho no. Wͻnom ka kyerɛ wͻn a wͻde saa nsɛm wei brɛ wͻn no na wͻfa wͻn sɛ wͻn ho nnhia. Wͻnom se wͻde wͻn a w’ahyɛ bͻ ama Imam a w’aba saa berɛ yin a wͻnom pɛ sɛ wͻhyɛ no ma sɛ wͻnom bɛyi gyidie akyen ewiase ɛne ɛnoͻma a ɛho ɛnnhia a ɛbɛyi wͻn adwene na ɛbɛma wͻnom ɛyerɛ afiri wͻn anisoadehunu no bɛma wͻnom akasa wͻ nkyerɛkyerɛmu na ɛbɛsei wͻn ne wͻn awieɛ. Wͻnom ka sɛ, wͻn a wͻka nsɛmhunu, sɛ anka wͻnom wͻtema ma wͻn ne Jama’at no a wͻka sɛ ɛnni kwan sɛ wͻka saa asɛm wei kyerɛ obiara ɛfiri sɛ wͻka a w’atwitwa wͻn nantiri wͻ saa adwene wei no nsesaeɛ ho kwan bɛbue. Khuddam ne Ansar ne Lajna nyinaa nka mom na wͻntu suban bͻne biara ase. Yɛserɛ sɛ Onyankopͻn nhyira saa Asͻredan wei wͻ kwan biara so.
Hadhrat Khalifatul Masih busa mpaeɛ ma Ahmadiyyani bi a w’abͻ ne tuo wͻ Pakistan. Ne din de Nawab Shah. Ɔyare paa wͻ Karachi ayaresabea na ɛnkyɛ biara ayaresafoͻ (Doctors) no bɛtumi akyerɛ sɛneɛ n’apͻmuden teɛ.
2. Master Abdul Majeed Ali Sahib